Jaarso - Wikipedia
Jaarso waa qabiil ka mid ah qaabiilada ugu waa wayn geeska Afrika , Beelwaynta jaarso waxay ka mid tahay beelaha ku nool Ethiopia kuwa ugu badan dad ahaan iyo dhul ahaanba.
Qabiilka Jaarso wuxuu dagaa wadanka Kenya, Somaliland iyo Ethiopia gaar ahaan kililada Soomaalida iyo kan Oromo-da, magaaloyinka ay asal ahaan u dagaan waxaa ka mid ah Jigjiga, Diredaba, Harar, Tuli Guled, Jinacsani, Ejersa Goro, Baabili,Gursum, Bombas,Dhagaxle, Xaadaw,Ordo, Hawaday,Fayaanbiro, Fayaan Hujubo, Kombulsho, Haramaya, Dadar, Baali, Dhangago, qaybo badan oo ka mid ah Gobalada Oromia, sidoo kale Gobolka Liibaan ee Somalida Ethiopia, xadka Ethiopia iyo Kenya iyo dhanka kale ee xadka Ethiopia iyo Sudan.
Umada Jaarso waa umad taariikh wayn ku leh Geeska Afrika waana qabiilkii ee ugu hor yeeshay boqortooyo maamuli jirtay in badan oo ka mid ah wadanka Ethiopia Waxaana la odhan jiray Jaarso Sultanate boqortooyadani waxay kulmin jirtay oo hoos imaan jiray dhawr boqortooyo oo caanka ah Geeska Afrika ilaa hadana taariikhdooda lagu barto kuliyadaha, jaamacadaha iyo iskoolada wadanka Ethiopia waxaana ka mid ahayd boqortooyadii waynayd ee la odhan jiray Sultanate of Dawaro ee uu Amiirka ka ahaa Sheekh Ḥaydar (Haydara), (Dawaro waa beel ka mid ah qabiil waynaha Jaarso ), Boqortooyadaasi waxay lahayd xeer caan ahaa oo ay ku maamuli jirtay in badan oo ka mid ah dalka ethiopia xeerkaas oo loo yaqaan xeerka Jaarso ilaa iyo hadana ay isku maamulaan dadka ku aftirsada qabiil waynaha Jaarso .
Taariikhaha Dhul Waynaha Jaarso
Qabiil waynaha Jaarso wuxuu Rabbi ku manaystay dhul barwaaqa ah oo aad u wanaagsan kuwasoo raadad taariikheed leh. raadadka taariikheed ee dhulka Jaarso caanka ku yahay waxaa ka mid ah:
Dakar caasimadii labaad ee Ifat Sultanate
Tuuladii uu ku dhashay Imaam Axmed Guray Raximulaah iyo Masaajidkii ugu horeeyay ee uu yagleelay Imaamku kuna yaala ilaa iyo hada tuulada qadiimiga ah ee loo yaqaan Derbiga.
Magaalada Ejersa Goro oo uu ku dhashay boqor Haile Selassie sanadkii 23 July 1892.
Caasimadii Labaad ee Boqortooyadii Ifat Sultanate laguna magacaabi jiray Dakkar magaaladaas oo hada loo yaqaan Jinacsani.
Tuli Foqosho oo ah tuuladii lagu aas aasay xeerki , goobtaas oo ay laba sano fadhiyeen waxgaradka [] si ay u sameeyaan xeerkaa.
Taariikhaha caanka ah ee Qabiilka Jaarso ,waxaa ka mid ah : Boqortooyadii Jaarso Sultanate ee ka talin jirtay qaybo badan oo ka mid ah dalka Ethiopia,
Boqortooyadii Sultanate of Dawaro ee uu amiirka ka ahaa Sheekh Ḥaydar (Haydara).
Kaalintii ay ku lahayd Ifat Sultanate.
Dagaalkii Jaarso iyo Boqortooyadii Menelik ee loogu magac daray JALANQO.
Doorkii ay ka qaadatay halgankii Imaam Axmed Guray.
Dagaalkii qadhaadhaa ee ay lagashay Taliskii macangaga ahaa ee Xayla Siilaasi sanadku markuu ahaa 1940 kii, dagaalkaaso looyaqaan Dagaalkii Kanooniga.
Aas aaskii ururkii dhalinyarada xornimadoonka soomaaliyeed ee SYL.
Dagaalkii hubaysnaa ee ay la gashay Dowladii kaligii taliye Mingistu iyo aas aaskii Jabhaddii Horyaal ee ay Beeshu ka midka ahayd qabiiladii ugu awooda badnaa kana danbeeyay in la sameeyo Jabhaddii HORYAAL.
waxaa kale oo ay lee tahay misena ay ku faani kartaa xeerka soo jireenka ah ee lagu magacaabo Xeerka Jaarso kaasoo u kala baxa Laba Qaybood , xeerarkaas oo ay qabiilada kale usoo doonan jireen si loogu kalo saaro marka ay is qabtaan dhexdooda iyagoo odhan jiray waa in aynu ku kala baxnaa xeerka Jaarso , xeerkaas oo lagu aas aasay tuulada qadiimiga ah ee lagu magacaabo Tuli Foqosho. Qabiil waynaha Jaarso waxay ku fadhiyaan dhul aad u balaadhan oo ka mid ah dalka Ethiopia.
Umada Jaarso waa umad ku hadasho laba luuqadood, 65% waxay ku hadlan Af-Oromo , 45% waxay ku hadlaan Af-Soomaali.
Qabiilka Jaarso waa beel nabad jecel isla markaana aad u ixtiraamta beelaha ay wada degaan waxaana daliil kugu filan qabiilada kale ee ay soo dajiyeen dhulkooga iyagoo siiyay beero ay quutan iyo deegaan u gaar ah taasina waa dabeecadaha ay caanka ku yihiin.
Qabiilka wuxuu u kala baxaa:[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Jaarso wuxuu dhalay (6) wiil sida la sheegana Sadex waa isku bah sadexda kalana waa isku bah waxaana loo kala qaybiya Labada Bahood waxayna kala yihiin, Bah Midig iyo Bah Bidix waxayna kala yihiin :
Oroma (curadku waa Oroma )
Beesha Waro Dhaqo ( Reer Dhaqo )
Beesha Waro Sayo ( Reer Sayo )
Beesha Waro Oogo ( Reer Oogo )
4. Beesha Dawaro waa 8 Jilib
* Wara Murjaan
* Wara Abraan
* Wara jido
* Wara Ya'a
* Wara Baro
* Wara Salow
* Wara Qaalu
5. Beesha Oogo
6. Beesha Orama waa 6 Jilib
* Wara Diyo
* Wara Ayaago
* Wara Wardu
* Wara mala halaku
Wixii khalad ah ee ku jira si aan u saxo iigu soo dir ciwaankan abdikenim@gmail.com.
Waxaa diyaariyay oo idiin soo gudbiyay, Abdikeni Mohammud.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaarso&oldid=150904"	Liiska laga galo
English	Bedel linkiga	Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 16:52, 17 Diseembar 2015.